Iza no Mitondra An’​izao Tontolo Izao? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bengali Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nzema Népali Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Iza no tena mitondra an’izao tontolo izao?
Raha Andriamanitra no mitondra an’izao tontolo izao, nahoana no be dia be ny fijaliana?
Maro no mieritreritra fa Andriamanitra no mitondra an’izao tontolo izao. Raha izany no izy, nahoana no be dia be ny fijaliana? (Deoteronomia 32:4, 5) Milaza ny Baiboly fa eo ambany fahefan’ilay ratsy izao tontolo izao.—Vakio ny 1 Jaona 5:19.
Nahoana anefa ilay ratsy no lasa mpifehy ny olombelona? Nikomy tamin’Andriamanitra ny anjely iray tany am-boalohany, ary nampirisika ny mpivady voalohany hikomy koa. (Genesisy 3:1-6) I Satana io anjely io. Nifidy ny hanaraka an’i Satana izy mivady, ka toy ny hoe nanao azy ho mpitondra azy ireo. Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra ihany no manana zo hitondra. Tiany anefa raha mifidy azy ho mpitondra ny olona satria tia azy. (Deoteronomia 6:6; 30:16, 19) Indrisy fa voafitaka ny ankamaroan’ny olona, ka nanahaka an’ilay mpivady voalohany.—Vakio ny Apokalypsy 12:9.
Iza no hamaha ny olana mahazo ny olombelona?
Tsy hoe havelan’Andriamanitra hitondra foana akory i Satana. Hampiasa an’i Jesosy izy mba hanafoana ny ratsy nataon’i Satana.—Vakio ny 1 Jaona 3:8.
Homen’Andriamanitra hery i Jesosy, mba handringanany an’i Satana. (Romanina 16:20) Hitondra ny olombelona Andriamanitra avy eo, ka hataony sambatra toy ny nieritreretany azy tany am-boalohany izy ireo.—Vakio ny Apokalypsy 21:3-5.